Article submitted by: minkyaw thuyein on 1-Jun-2013
အိပ်ယာမှ နိုးလာ သော မြန်မာ ခြင်္သေ့များ။
အရေး ကြီးတာက ကောဠဟဠတွေ အခြေအမြစ်မရှိတာတွေကို မစစ် မဆေးဘဲ မယုံကြဘို.ဘဲ ၊ ငါ.တကော စစ် ဆိုတာကြောင့်တကောင်းပြည်ကြီးပျက်ရဘူး
သတဲ့ ၊ “တကောင်းပြည်ကြီး” ဆိုတာဘယ်လောက်ကြီး ကျယ်တဲ့ ပြည်ကြီးလဲ တော ဒို.လဲ မသိဘူး။ သိဘို.လဲ မလိုဘူး၊ သိလို.လဲ ဘာမှမထူးဘူး။ တကောင်းဆိုတာ မင်းနေပြည် အဖြစ် တချိန်ကရှိခဲ့ဘူးတယ်. အခု လဲ တကောင်းမြို.အဖြစ် ရှိနေတုန်းဘဲ ဆိုတာ တော့ သိတယ်။
“ မြန်မာတွေ နိုးကြားမှ ဒိုးပြားရမယ်” ကြားဘူကြပါလိမ့်မယ် ပြောဘူးပါတယ်၊ နိုးနိုးကြားကြားရှိမှု ဟာ အရေးကြီးတယ်. တရုတ်အဆိုကတော့“အိပ်နေတဲ့ ကျားကို မနှိုးပါနဲ”့ တဲ့ မြန်မာတိုရဲ အမှတ်တံဆိပ်ကတော့ ခြင်္သေ့ လို. ဆိုတယ်
၊ ဒီတော့ “အိပ် နေတဲ့ ခြင်္သေ့ကို မနှိုးပါနဲ့” ပေါ့ ဟုတ်လား?
သည်းခံဘို. ခန္တီပါရမီရှိဘို. ဆိုတာ ကောင်းတဲ့အကျင့်ဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ တဖက်က ဘာလုပ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ထည့်တွက်ရလိမ့်မယ်လေ ၊ ထစ်ကနဲ့ ဆို မဆင်မခြင် ရုတ်တရက် ဒေါသနဲ.ထ လုပ်မိမှာမျိုးကိုတော့ ရှောင်ရမယ်၊ ဟန်.တား ထိမ်းသိမ်းရမယ် ဆိုတာကို ပြောတာပါ ။ သူများလုပ်သမျှအကောင်းအဆိုး
မခွဲခြားဘဲ ဒေါသလွန်တာမျိုးကို ပြောတာ ။ လုပ်သမျှ ခံနေရမယ် လို. ဆိုလိုပုံ
တော့ ရှိ မယ် မဟုတ်ဘူးလို. ယူဆတယ်၊၊
နှုတ်နဲ.ဖြစ်စေ. ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဖြစ်စေ ထိခိုက်ဆော်ကားမှူတွေဟာ ကျုးလွန်သူရဲ. စိတ်ထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာခန်.မှန်းလို.ရတာမို. အတိုင်းအတာ
မရှိ သည်းခံခြင်းမျိုးတော့ မဟုတ်၊ သည်းခံသင့်မှခံမယ် ၊ သင့်တော် သလို တုန်.ပြန်မယ် တန်ပြန်ရမှာဘဲ။ ဒါဟာ လူ.သဘာဝကို လွန်ဆန်နေတာ မဟုတ်ဘူး ၊ လူအများဟာ ဘုရားဖြစ်မဲ့ ကျောက်ခဲ အုတ်ခဲ၊ အင်္ဂတေ တွေ သဲတွေ မဟုတ်
ကြဘူး။ ဆိုတာကို တဖက်လူကလဲ သိ ဘို. လိုတယ်။ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး
အထိ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်ပြီးဖြစ်စေ ဆော်ကားလာရင်တော့ ၊ ကုန်းပြီး ကိုက်ဘဲကိုက်ရ ကိုက်ရလိမ့်မယ်။
ဗုဓ္ဒဘာသာ ဆိုတာနဲ့ သူတပါး လုပ်သမျှ ခေါ့င်းငုံ.ခံနေရမယ် မခံရင် ဗုဓ္ဒဘာသာ
ကောင်းမဟုတ်ဘူးလို.ြေ့ပာခြင်လို.လား? ခရစ်ယန်ကောင်း မွတ်စလင်ကောင်း
တွေ လောက်ဘဲ ဗုဓ္ဒဘာသာတွေ ကောင်းနိုင်တယ် ။
လာရှိုး အပါအ၀င် မြန်နာနိုငငံအရပ်ရပ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစတွေကို ဘာသာရေး လူမျိုးရေး မဖြစ်ရအောင်အစိုးရက တာဝန်ရှိသလို အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်
်အောင်၊ အုံ.သြော် သောင်းနင်း မနိုင်မနင်းတွေ မဖြစ်အောင်ရအောင် ထိမ်းထိမ်း
သိမ်းသိမ်း လုပ် နေတယ်ဆိုတာ သိတယ်၊
နိုင်ငံတော် ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄ မှာ ဘာသာတိုင်းကိုလွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်နိုင်ခွင့်ပြုထားသလို ပုဒ်မ ၃၆၄ မှာ “ နိုင်ငံရေးအလို.ဌာ ဘာသာ သာသနာကို အလွဲသုံးစား မပြုရ” လို.လဲ အတိအလင်း ပြဌာန်းထားတယ်၊
ဒီဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ နဲ့.အညီရေးဆွဲတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနဲ့ကျင်းပတဲ့ ရလဒ်နဲ့ဖွဲ.စည်းခဲတဲ့ ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်တဲ့ အစိုးရကို နိုင်ငံတကာက ထောက်ခံခြင်း အားပေးခြင်းတွေပြုလာတဲ့ အချိန်ကစပြီး တက်လာအပြီးဒ ကချင် ခရစ်ယန်တွေ. မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေဟာ တမျိုးမဟုတ် တမျိုးနဲ.အကြောင်းမရှိ ရမယ်ရှာပြီး ဘာသာရေးခုတုန်း ။ အစိုးရကိုဒင် မဟုတ်တော့ဘဲ အခြားဘာသာခွဲ ဖြစ်တဲ့ ဗုဓ္ဒဘာသာ အများစုကိုပါ ၊ အကြပ်ကိုင် ရန်ရှာလာကြ
ဒါတွေကို ဗုဓ္ဒဘာသာဝင် ရဟန်းရော လူတွေပါ ရိပ်စားမိပြီး သီးခံခဲ့တာကိုမှ အားမနာ ပြင်ပကခရစ်ယန်တွေမွတ်စလင်တွေကပါ ပြည်တွင်းက ခရစ်ယန်
တွေ မွတ်စလင် အစွန်းရောက်တွေကို နည်းအမျိုးမျိူး မြှောက်ပင့်အားပေးနေကြ
တာကိုသိနေရတာဘဲ၊ ပြင်ပက မွတ်စလင်အဖွဲချုပ်တို. ဘာတို.ဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံကို လာပြီး စုံစမ်းလိုသတဲ့ ဖြေရှင်းပေးခြင်တဲ့ သဘောနဲ. ၀င်ရှုတ်ခြင်
ကြသေးတယ် ၊ သူတိုကိစ္စကျနေတာဘဲ ။
မွတ်စလင်တွေဟာ တကမ္ဘာလုံးနဲ.ရန်ဖြစ်နေတယ် . မြန်မာနိုင်ငံက မြန်မာတွေ ၊ ဗုဓ္ဒဘာသာတွေ ဟာ မွတ်စခင်ကို ခွဲခြားမှု မရှိ အမြဲ လေးစား တန်းတူ ထား
ဆက်ဆံခဲ့တာ ကိုမှ ကျေးဇူးမမထောက်တဲ့ အပြင် အခု ဆိုရင်ကျေးဇူးကန်းလာ
ကြတာကို မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဓ္ဒဘာသာတွေ တွေ.ကြုံခံစားနေရတယ် ၊ ဒီနေရာ
ဟာသီးခံခြင်းနောက်ဆုံးစည်းကိုကျော်လာနေတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဗူဓ္ဒဘာသာ
တွေ နိုးကြားလာပြီး ၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် ကာကွယ်လာကြရတော့တယ်၊
အင်္ဂလိပ်လို ပြောရရင် “The best defense is to offence” ဆိုတဲ့ စကား
အတိုင်း. ရဟန်း လူအားလုံးက ဒို. ဘယ်ဘာသာ ဘယ်လူမျိူးကို မှမလေးမစား
မပြု ၊ ဘယ်လိုမှ မစော်ကားဘူး ၊ ဒို.ကိုလဲ ဘယ်လိုမှ မစော်ကားနဲ့ ဆိုတာကို ကျောင်းမှန်းကန်မှန်း သိအောင် လုပ်ပြနေတာဘဲ ၊ ရပ်တန်းက ရပ်နိုင်ဘို. နားလည်မှူတွေ အများကြီးလိုတယ် . ၂ ဦး ၂ ဖက် သည်းခံမှူတွေ အများကြီး
လိုတယ်။ ဖြစ်လာမဲ့ အကြောင်းတွေ ရဲ. အကျိုးဆက်တွေကို ထည်.သွင်းစဉ်းစား
ရမှာကတော့ အမှန်ဘဲ ။
ဒီနေရာမှာ ပြည်သူ.အစိုးရဟာ ပြည်သူလူထုအများစုရဲ.စိတ်နေသဘောထားကို အလေးထား၊ ဖွဲ.စည်းပုံမှာ မူတည် ဆောင်ရွက်ဘို. လိုတယ်။ လှုပ်ရှားဘို.လို
တယ်။ တဖက်က မရိုးမသားလုပ်လာတာတွေကို ကိုယ်က ရိုးရိုးသားသားပြန်
ဆက်ဆံနေလို.တော ရွာက မိအေး ဘ၀ရောက်သွားလိမ့်မယ်။
ဒီလိုတော့လဲမဖြစ်ဘူး ထင်တယ်။. ဗုဓ္ဒဘာသာ သာသနာ ဆုံးပါးအောင် ၊ မြန်မာ
အမျိုးသမီးတွေကို ချိန်းချောက်ပြီး သားမယားပြုနေတာတွေဟာ တမင်္ဂလာစံနစ်
ချပြီး လုပ်နေတာ။ မွတ်စလင်ဘာသာကို ကမ္ဘာမှာ မတရားပြန်.ပွားအောင်လုပ်
နေတာတွေ ကို ကမ္ဘာ.နိုင်ငံအားလုံး ကြုံတွေ.နေကြရတယ် ဆိုတာကို သတိမူမိ
ဘို.တော့လိုတယ် ။ မတရား တာကို တရားသဖြင် ဖြစ်အောင်လုပ်ဘို.တော့ ခက် တယ် ။ မတရားတာကို သည်းမခံတဲ့ သူတွေကို သည်းမခံရကောင်းလား
ဆိုပြီး အပြစ်ပုံ.ချ အပြစ်ယူလို.တော့ တရားမယ် မဟုတ်ဘူး။
အစိုးရ ဆောင်ရွက်ချက်ကို ပြည်သူတရပ်လုံးက မကျေနပ် မနပ်ဖြစ် လာရင်၊ သူတို.ဥပဒေနဲ သူတို.တရားတယ် ထင်တာကို လုပ်လာကြလိမ့်မယ် ဆိုတာကို သတိထားရမယ် ။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောမှ သိမယ် ဆိုတဲ့လူတွေ အတွက်
ပြောရရင်တော့ they will make their own law , and take it into their own hands, and execute ဘဲ/ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆိုတဲ့ လွတ်လပ်
သော နိုင်ငံ in the land of the free ဆိုတာမှာ အရှိကို အရှိအတိုင်းပြောရရင်
် နေ.စဉ်နေတိုင်း လူတွေဟာ သေနတ်တွေနဲ့တထိုင်းထိုင်း ပစ်သတ်နေကြတယ်၊
်. လက်ဦးသူ လက်မြန်သူက အနိုင်ဘဲ ဥပဒေဆိုတာက နောက်မှ လိုက်ခြင်လိုက်
လာမယ် ။ အမေရိကန်တွေကို တချို.က Sons of the Gun လို. ခေါ်ကြတယ် ။
နိုင်ငံသားတိုရဲ.ရပိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတရပ်လို.ပြဌာန်းထားတယ်။ ဒီလိုခွင့်ပြုထား
တာကိုဘဲ ကောက်ခြင်တဲ့ အဓိပါယ်ကောက်နိုင်တယ် ၊ နိုင်ငံသားတိုရဲ့ အမှုကိစ္စ
အ၀၀ ကို အစိုးရကတာဝန် မယူနိုင်တဲ့အတွက် အချင်းချင်း ပြေလည်တဲ့ နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းကြ ဆိုတဲ့ သဘောလား? နိုင်ငံသားတိုကို ထိမ်းမနိုင်သိမ်းမရရင် အစိုးရ
က လူတွေကို ပစ်သတ်နေစရာမလိုဘူး ၊ သူတို.အချင်းချင်းပစ်သတ်ကြလိမ့်
မယ် ဆိုတဲ့.သဘောလား၊ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်သူတွေဟာ armed and dangerous မို.လက်ရ ဖမ်းဆီးဘို. ခက်မယ် ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပုလိပ်တွေအနေ
နဲ့လဲ ရာဇ၀တ်ကောင်ကို ဥပဒေအရ အပစ်ရှိ မရှိ ရုံးတင် စစ်ဆေးစရာမလို နေရာမှာတင် အပြတ်ရှင်း ပစ်သတ်နိုင်အောင် အခြေအနေ တွေဖန်တည်းပေး
ထားတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ် ။ မဖြစ်သေးတာတွေသာရှိတယ် မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူး
ဆိုတဲ့ စကားဟာ မှန်သောစကားဘဲ။
အစိုးရဟာ ဘာသာ သာသနာအပါအ၀င် ၊ နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတိုကိုထိရောက်
စွာ ကာကွယ်ပေးခြင်း မပြုနိုင်ရင် နိုင်ငံသားတို.ဟာသူတို.ဟာ သူတို.ဖြစ်တဲ့
နည်း ကာကွယ်ကြရလိမ်.မယ်၊ လက်ပိုက်ပြီးတော့ ကြည့်မနေနိုင် သည်းခံနေနိုင်
ဗုဓ္ဒဘာသာတွေ ရဟန်းတော်တွေကို မေတ္တာ ရပ်ခံခြင်တာက ၊“ငုတ်မိ သဲတိုင်
တက်နိုင်အဖျားရောက် ’’လို. မြန်မာတို. ဆိုးရိုးရှိတဲ့ အတိုင်း ၊ သူတို. စ လာတဲ့ ပြသနာကို ကိုယ်က အဆုံးသတ် ပေးဘို.လိုအပ် ကောင်း လိုအပ်လိမ့်မယ်။ ဒုတ် ဒုတ် ချင်း ၊ ဒါး ဒါးချင်း ၊ လှံ လှံချင်း ဆိုတာတွေ ရှိပေမဲ့ ၊ လက်လွန် ခြေလွန် မဖြစ်အောင်မြွေမသေ ဒုတ်မကျိုး တော့ ထိမ်းလုပ်ဘို.လိုလိမ့်မယ်။ မြွေမသေ
ရင် ကိုယ်.ကို ပြန်ကိုက်နိုင်တယ် ။ ဒုတ်ကျိုးရင်လဲ ဖနောင်နဲ့ တင်ပါး တသားထဲ ကျအောင် ပြေးဘို.သာ စဉ်းစား ပြေးလမ်းရှာထားပေ တော့ မောင်တို. ။
ဘယ်နေရာကစမလဲ ဘယ်နေရာမှာ ဆုံးမလဲ? အဆုံး မသိနိုင်နဲ့ ကိစ္စတခုကို မစမိတာ အကောင်းဆုံး တဲ့၊ စမိရင်တော့ ဆုံးအောင်၊ အဆုံးထိ လုပ်ကြရလိမ့်